रेडियो तमोर १०२ मेघाहर्ज अन्तिम सास फेर्दै गर्दा डा. उपेन्द्र देवकोटाले छाडेका पाठहरु
जन्मपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ । कसैको छिटो हुन्छ, कसैको ढिलो । जिन्दगीको सास्वत सत्य यही भए पनि कालले डा. देवकोटालाई अरु पाका नेपालीलाई जति पनि समय दिएन । तर, जीवनको अन्तिम घडीसम्म अरुको उपकारमा लागेका देवकोटाले देहत्याग गरिसकेपछि पनि नेपालीका लागि अनेकौ महत्वपूर्ण पाठ छोड्नु भएको छ । आफै उदाहरण भएर मृत्युपर्यन्त उहाँले देखाएको बाटो अनुसरण गर्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।- उज्यालो अनलाईनवाट